मलिकाले छाडिन् सत्यम, उपासनाको इन्ट्री ? मलिकाले छाडिन् सत्यम, उपासनाको इन्ट्री ?
मलिकाले छाडिन् सत्यम, उपासनाको इन्ट्री ?
पल-समीक्षा विवादको असर फिल्म ‘सत्यम’को कलाकार समीकरणमा देखिएको छ । पल शाहको जोडीको रुपमा कास्ट गरिएकी अभिनेत्री मलिका महत प्रोेजेक्टबाट बाहिरिएकी छिन् । फिल्मबाट मलिकाको बहिर्गमनलाई पल शाहको पछिल्लो विवादबाट आफूलाई अलग राख्न खोजेको रुपमा उनी निकट स्रोतहरुले बुझेका छन् ।
तर, फिल्म निर्माण कम्पनीलाई मलिकाले आफूले यस्तो निर्णय लिनु पछाडि सुरु भएको कलेजको पढाइ र समयतालिकालाई कारणको रुपमा पेश गरेकी छिन् । निर्माता रेशम सापकोटाले मलिकाले फिल्म छाड्नुको कारण पढाइ नै रहेको दावी गरे । बिग बजेट र स्टारकास्ट भएको फिल्म छाड्ने मलिकाको निर्णय यस्तो समयमा भएको छ जतिबेला पल शाह र गायिका समिक्षा अधिकारीबीचको ‘सम्बन्ध’को विवाद उत्कर्षमा छ । मलिकाले फिल्म छाडेपछि उनको ठाउँमा उपासनासिंह ठकुरीलाई निर्माताले अनुबन्धित गरेका छन् ।
अब पलसँग उपसनाले स्क्रिन रोमान्स गर्नेछिन् । राजेश हमालको जोडीको रुपमा नीलम चन्द यसअघि नै अनुबन्धित भैसकेकी छिन् । शनिबार बेलुका उपासना र निर्माताबीच फिल्म सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । तर, मलिकाको बहिर्गमनप्रति निर्माण कम्पनी सन्तुष्ट देखिएको छैन । के मलिकाले अब पलसँग अन्य फिल्म र म्युजिक भिडिओमा पनि सहकार्य नगर्ने संकेत दिएकी हुन् ? केही स्रोतहरुले नेपाल प्रेसलाई भने, हुनसक्छ, उनको असन्तुष्टि सत्यममा देखियो ।
पलसँग म्युजिक भिडिओमा खेल्न मानिनन् भने त्यसलाई स्वभाविकरुपमा लिँदा हुन्छ । पल र मलिकाले कैंयन हिट म्युजिक भिडिओमा सहकार्य गरेका छन् । तर, यो सहकार्यको भविष्यमा सत्यम प्रकरणले प्रश्न उब्जाइदिएको छ । पल र समीक्षाको सम्बन्ध अहिले चर्चामा छ । उनीहरुले बिहे गर्न कागजी सम्झौता गरेको समाचार सुरुमा नेपाल प्रेसले लेखेको थियो ।